Ny fitomboan'ny fitadiavana finday | Martech Zone
Ny fitomboan'ny fitadiavana finday
Alarobia, Oktobra 24, 2012 Alahady, Jona 21, 2015 Douglas Karr
Ny fananana tranokala finday dia tsy safidy ary tsy tokony ho upsell ataon'ireo mpamorona tranonkala amin'izao fotoana izao. Efa am-bolana maro izahay no niasa tamin'ny kinova finday amin'ireo tranokalanay sy tranokalan'ny mpanjifa ary mahomby izany. Eo ho eo, hitantsika fa mihoatra ny 10% ny mpitsidika ny mpanjifanay no tonga amin'ny alàlan'ny finday. On Martech Zone, izay nohamarinina ho an'ny fitaovana finday, hitantsika 20% mahery amin'ny fifamoivoizanay avy amin'ny fitaovana finday na takelaka!
Ny tranonkala finday dia sehatra an-tserasera mitombo haingana. Trano misy finday maherin'ny 4 miliara mifandray, ny statistika dia mampiseho fa ny fampiasana finday dia hahatratra ny fivezivezena amin'ny birao amin'ny taona 2014. Midika izany fa na inona na inona karazana orinasa ataonao, ny mpihaino anao dia eo amin'ny tranonkala finday, ary tokony hahatratra azy ireo ianao.
Misy fitondran-tena manokana amin'ny fitsidihana finday izay tsy mitovy amin'ny mpitsidika tranonkala mahazatra. Ireo mpikaroka finday izay tonga eo amin'ny tranokalanao dia mitsidika ny orinasanao na mikaroka fividianana izay hataony. AlchemyViral dia nametraka an'ity fampahalalana mampino ity infographic amin'ny fanatsarana finday.
Tags: alchemyviralSary torohayfinday infographicfanatsarana findayfanatsarana findaykaroka findaystatuta fikarohana findayfinday seoSEO
Hitanao ve izay alain'i Google?